Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Naftaderm"? Yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa, contra-izinkomba izidakamizwa ethulwa ngezansi. Uyofunda mayelana ebekiwe ukuthi lokhu kusho izingane, lokho izakhiwo ke anazo angamalungu ayo futhi abakushoyo ngaye iziguli.
Incazelo, ukuma, emabhokisini Ukwakheka
Ngayiphi ifomu ekhiqizwa izidakamizwa "Naftaderm"? Izibuyekezo ochwepheshe ukubika ukuthi lokhu izidakamizwa libizwa ngendlela ehlukile: amafutha, ukhilimu, ijeli, njll Nokho, liqhubeka ukudayiswa ngesimo umbala liniment ensundu, okuyinto has a ukunambitheka ababuthakathaka ehlukile ...
ingxenye yamanje ithuluzi kuyacaciswa uwoyela naftlanskaya. Njengoba izithako engeziwe esetshenziswa 95% Ethanol, emulsifying wax namanzi ahlanzekile.
Thenga ukhilimu "Naftaderm" izilinganiso okuyizinto oqondile, kungaba amashubhu (15, 10, 35 no-20 g) zafakwa amaphakethe amakhadibhodi.
Luthini olwakho "Naftaderm" wamafutha kanjani? Uphenyo odokotela libike ukuthi kusebenta zokwelapha zomuthi ihlobene eduze isithako yayo asebenzayo.
Njengoba kushiwo ngenhla, izidakamizwa esebenzayo okusekelwe uwoyela Naphthalan. It limbiwa Naftalan, esemgwaqweni e-Azerbaijan. hydrocarbon Ngenxa naphthenic okuyinto ungene ngezithako zawo, ke possesses the izakhiwo ekhethekile kakhulu ukuhlukanisa ke kusukela uwoyela evamile.
Naftalan - akuyona ezivuthayo. It alisetshenziswa njengoba umthombo energy, ezifana nezinye amamaki. Ngokwezazi-mlando, lo mkhiqizo ibilokhu isetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo njengenhlangano izidakamizwa ngempumelelo ekwelapheni izifo kohlelo locomotor kanye nezifo zesikhumba.
I izakhiwo zomuthi
Yini property umuthi onjalo, njengoba "Naftaderm" (liniment)? Izibuyekezo ochwepheshe abanolwazi ukubika ukuthi lokhu izidakamizwa has analgesic, umphumela isinqandakuvunda futhi eqeda ukuvuvukala.
Ngemuva kokufaka isicelo nomuthi endaweni ethintekile kwesikhumba ke ikhuthaza ukuvuselelwa okusheshayo.
Ngokwenza ngcono umzimba okwenzeka izicubu ukulungiselela kanyekanye kuthuthukisa onomopho, futhi retards ihlule kumiswa.
Ngokusho imiyalelo enamathiselwe, liniment "Naftaderm" uyakwazi ukwandisa surfactant izitsha ahlelwe, ukwandisa ezingeni elithwala umoya-mpilo futhi namangqamuzana abomvu egazi, sinikela ekuxazululeni senzo.
Akunakwenzeka ukuba ukukhansela, nokuthi wamafutha izidakamizwa ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana corticosteroids, amahomoni ie we- cortex adrenal, okuyinto ifa umsebenzi eqeda ukuvuvukala.
Iziphi ezinye izici enza lesi sidakamizwa "Naftaderm"? Uphenyo odokotela bathi lokhu izidakamizwa has umphumela antipruritic. Lokhu kusiza ukunciphisa ukungaphatheki kahle izifo zesikhumba ahlukahlukene.
Ngingakusebenzisa kanjani lokhu izidakamizwa "Naftaderm" e-psoriasis? Izibuyekezo lodokotela ukubika ukuthi lesi sifo kubonakala ukhilimu kuyaphumelela. Futhi, ngenkuthalo lisetshenziswe lezi zifo ezilandelayo kwesikhumba:
seborrhea, eczema zasezindaweni ezihlukahlukene, sycosis;
atopic dermatitis, Erysipelas, pyoderma;
zoster Pink, carbuncles namathumba, isikhumba ulceration;
zonke izinhlobo zokusha (chemical, ezishisayo, emisebeni).
Kufanele kuphawulwe ukuthi imfundo olucutshungulwayo nomuthi kungenziwa Kunconywa ukuba isetshenziswe izifo ezihlukahlukene isikhumba, okuyinto umthwalo ukwephulwa izicubu trophism. Ziyakwazi:
Ingabe izidakamizwa "Naftaderm" (wamafutha) ngoba izifo neuropathy isimiso sezinzwa? Uphenyo odokotela uthi lokhu remedy siyasebenza ku:
Kukhona futhi okubuyayo phezu ukhilimu njengoba izindlela eziphumelelayo yezifo of the system zemisipha, okuyinto ahambisana ubuhlungu syndromes (isib, samathambo, ukugobeka komhlandla, samathambo yanoma yimuphi umsuka, ukulimala ebuhlungu imisipha, nemisipha, amalunga namathambo).
Ngingaba ukhombe Liniment "Naftaderm" izingane? ochwepheshe lezivakashi abonisa ukuthi izidakamizwa is contraindicated ukusetshenziswa ekuqaleni kuka ebuntwaneni (iminyaka 5-7).
Kufanele kuphawulwe ukuthi kule imithi, kukhona eminye imikhawulo ukusetshenziswa:
izithako isici esiyingqayizivele;
komdlavuza, kuhlanganise umdlavuza wesikhumba,
izifo igazi, okuyinto ahambisana oluhambisana syndrome.
Izidakamizwa "Naftaderm": yokusetshenziswa
Inani, impendulo nesineke ngalokhu thuluzi izokwethulwa ekupheleni.
kufanele ngisebenzisa kanjani imithi okukhulunywa? Ngokusho imiyalelo, umuthi okumele asetshenziswe endaweni isikhumba nge ungqimba elincanyana. Kulokhu-ke indawo ethintekayo liyadingeka ngaphambilini bahlanza futhi omile (uma kungenzeka).
I imithi okuye kwasakazwa eminyakeni isikhumba ukukhanya kanye massage emnene. Kakhulu ukukuthinta wamafutha akufanele kube. Imvamisa nokusebenzisa kwayo kabili ngelanga.
Isikhathi ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kumele ifakwe udokotela ukuba khona. Ngokwesilinganiso, inkambo ukwelashwa kungase kudonse mayelana 3-4 amasonto. Nokho, lesi sikhathi angase nemikhuba yazo ihluke kakhulu, kuncike ngezimo zesiguli, isifo sakhe futhi umuntu akusingatha ngayo izidakamizwa.
Iziphi izinkinga zokwelashwa kungabangela ukulungiselela yangaphandle "Naftaderm"? Izibuyekezo lodokotela abonisa ukuthi izidakamizwa has a ukubekezelelana kunalokho okuhle. Yena akuvamile iba imbangela nesenzakalo nemiphumela engemihle zomzimba womuntu.
Nokho, iziguli bathi ngezinye izikhathi waphawula ukoma kwesikhumba endaweni lapho umuthi lasetshenziswa. Kulokhu, ochwepheshe batusa ngokuhlanganisa ukhilimu nge izinto opholile kanye amafutha.
Uma ukoma ephawulwe kakhulu, le ndlela yokwelapha "Naftadermom" kufanele kuphazamiseke okwesikhathi 1-2 izinsuku.
Kufanele kuphawulwe ukuthi babeze amacala ngaphezulu ezingavamile imfundo folliculitis kubhaliswe. Ngokuvamile, i-isimo okungavamile ezifana kwenzeka ngokusebezisa isikhathi eside zomuthi. Ngaphezu kwalokho, nge ukusetshenziswa okuqhubekayo imithi ezigulini kukhuphuke isikhumba ukuzwela amathonya zangaphandle kanye icacisa permeability yayo ngoba izakhi ezahlukene. Leli qiniso kufanele kucatshangelwe uma wabelana namanye amanxusa zangaphandle.
Ngokusho imiyalelo, liniment "Naftaderm" zingahlanganiswa nezinye izidakamizwa. Ngenxa yokuthi kwakungekho nemiphumela engemihle esikhathini ukuxhumana lokhu izidakamizwa engakaze waphawula, ke kuvunyelwe ukuqoka njengengxenye ukwelashwa.
Izindleko kanye analogue
Inani liniment "Naftaderm" ngempela eliphezulu. Thenga mafutha e isamba 35 g unga ruble 490-510.
Lapho kubonakala ukuthi kunesidingo, i-nomuthi ungayithola enye ngezindlela ezifanayo. Ngu analogue lokhu ukulungiselela (mshini wezenzo) zibandakanya: "Vinylinum" i-hydrogen peroxide "Kaleflon", "Katatsel A", "Baktoderm" yezokwelapha isixazululo isinqandakuvunda, "Octenisept", "Katatsel 'potassium permanganate," Kamfotsin " "Gipozol H", "Dioksizol" isipanji collagen kusukela Sanguirythrine "Vitaon", "Dettol Benzalkonium chloride" "Pantotsid" dermatol-itiyela liniment, "Tambuil", brilliant green, "Galmanin", "Gipozol a", " Sanguirythrine "namafutha Shostakovskiy," Alora "," Aseptolin "," Anmarin ".
Ngokusho iziguli, abaphinelela wasebenzisa isidakamizwa "Naftaderm", limelela ngempumelelo kakhulu eqeda ukuvuvukala, antipruritic, magciwane futhi zikhuthaza ephulukisa ejenti. Ungakwazi ukuyisebenzisa izifo zesikhumba ahlukahlukene.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe lokhu izidakamizwa ukuthi cishe akalokothi abangele ukusabela ezingezinhle.
Kepha nemibiko engemihle-ke, njengoba umthetho, zihlobene izindleko eziphakeme izidakamizwa.
Ukhilimu Okuhamba phambili kwe-varicose emithanjeni on the imilenze. Wamafutha for ekwelapheni varicose emithanjeni
"Doxey-Umphetho": yokusetshenziswa, nozakwabo yangempela
Isidlo woqobo: Pita farshiruem
Zucco (esigodini). Ihhotela "Valley Sukkah"
Waterpark "chip" (Voronezh): izibuyekezo, izithombe, yocingo
Zitholakala kanjani hook iluphu: ongakhetha eziningana
Ibhethri enamandla elayishwayo yokubhema ugwayi: ukulungiswa, ukufundiswa kanye nempendulo
Arthur Conan Doyle, "Hound we Baskervilles." isifinyezo
Iyini inhlangano yomnotho yomphakathi?
Elingenamikhono nenhle of nutria: umthengi Izibuyekezo